Madheshvani : The voice of Madhesh - News Portal- पैसा खानेहरू एमसीसीको पक्षमा लागेका छन्
पैसा खानेहरू एमसीसीको पक्षमा लागेका छन्
हरिचरण साह, अध्यक्ष, नेपाली जनता दल
० एमसीसीबारे नेपाली जनता दलको धारणा के छ ?
—नेपाली कांग्रेसले पैसा लिएर एमसीसी सम्झौता गरिसकेको छ । यसबाट प्रचण्ड र ओलीले पनि फाइदा लिइसक्नुभएको छ । त्यतिखेरै उहाँहरुले संसदबाट पास गर्न खोज्नुभएको थियो । अहिले गठबन्धनको सरकार छ, यसले त्यतिकै पास गर्ने देखिन्छ । तर हामीले यो एमसीसीलाई स्वीकार गरेका छैनौं । सहयोगको नाउँमा हाम्रो स्वाधिनता, राष्ट्रियता र स्वाभिमानमाथि कुनै किसिमको आक्रमण भयो भने नेपाली जनताले स्वीकार गर्दैन । राष्ट्र रहेपछि त हामी नेपाली रहन्छौं । हाम्रो राष्ट्रियतामाथि हस्तक्षेप भयो भने अफगानिस्तानकै हालत हुने पक्का छ । त्यसकारणले यो एमसीसीलाई संशोधन नगरेसम्म संसदबाट पारित गरिनु हुँदैन । हुन त सत्ताधारी दलहरुले पारित गर्नका लागि विगतमा पनि प्रयास गरेकै हुन् । यो एमसीसी सम्झौता आज भएको होइन, चार वर्ष पहिला नै कांग्रेसको सरकारले गरिसकेको हो । तर पहिला जनतालाई यसबारे केही थाहा हुन दिएको थिएन । अहिले जनता जागरुक भइसकेका छन् । अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) ले नेपालले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै एमसीसी कुनै सैन्य रणनीति अन्तर्गत नरहेको बताएको छ । साथै उसले २०१७ मा हस्ताक्षर भएको सम्झौतामा अहिले आएर संशोधन गर्न नसकिने समेत प्रष्ट पारेको छ । अब हेर्दै जाउँ के–के हुन्छ ।
० अहिलेकै अवस्थामा एमसीसी पास भयो भने हाम्रो देश खतरामा पर्छ ?
— कसैको सहयोग लिनु नराम्रो कुरा होइन । भारत, चीन लगायत अन्य मुलुकहरुले त हाम्रो मुलुकलाई सहयोग गरिरहेकै छ नि, अमेरिकाले पनि सहयोग गर्दै आइरहेको छ । तर यो एमसीसीमा जुन किसिमका प्रावधानहरु राखिएका छन् जसले हाम्रो मुलुकको स्वाधिनता नै खतरामा पर्ने देखिन्छ । हाम्रो स्वाधिनतामाथिको आक्रमणलाई हामीले सहयोगको रुपमा लिनुहुन्छ, त्यो हस्तक्षेप हो । हस्तक्षेपकारी र नेपालको कानूनहरुमाथि हस्तक्षेप गर्ने खालका कुराहरु भएको एमसीसी हामीलाई चाहिँदैन । ७२ अर्ब रुपैयाँ त एनसेलबाट उठाउनुपर्ने छ, त्यो पैसा उठाएर लगानी गर्दा भइहाल्यो नि । किन ५० अर्बका लागि मरिहत्ते गर्ने ? हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधिनतामाथि यदि कसैले आक्रमण गर्छ भने त्यो गुलामी स्वीकार हुँदैन । नेपाल गुलाम राष्ट्र होइन, एउटा स्वतन्त्र राष्ट्र हो ।
० एमसीसी पक्षधर दलको नेतृत्वमा सरकार छ, जसलाई करिब दुई तिहाइको बहुमत प्राप्त रहेको छ । यसले यदि एमसीसी पास ग¥यो भने के हुन्छ ?
— उहाँहरुले एमसीसी पारित गर्नु होला, तर जनताको आवेग यस्तो हुन्छ कि त्यसको भुक्तान उहाँहरुले गर्नुपर्छ । सरकारमा बसेकाहरुसँग यो सम्झौता पारित गर्ने अधिकार त छ, गर्ला तर राष्ट्रमाथि त्यस्तो नकारात्मक असर प¥यो भने यसको जिम्मेवार उनीहरु नै हुनेछन् । जनताले उनीहरुलाई छाड्ने छैन । नेपाली समाज एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा विभाजित देखिन्छ । न संसदबाट एमसीसी अनुमोदन भएको छ, न सम्झौता संशोधनका लागि अमेरिका तयार छ । लामो समयदेखि अनिर्णित बनेपछि अमेरिकाले एमसीसीबारे टुंगोमा पुग्न दबाब बढाएको छ ।
० यो सरकारले एमसीसी पास गर्छ त ?
— अब सरकार उनीहरुको छ, संसद उनीहरुको छ, गुलाम सांसदहरु छँदैछन् । यिनीहरुले एमसीसी पास गरिहाल्यो भने त्यो नौलो कुरा हुँदैन । तर जनता यसबाट सचेत रहेका छन् । जनताले सबैसँग हिसाव माग्नेछन् । जनताको स्वाधिनता, राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता खोस्ने काम भयो भने इतिहासमा यिनीहरु कलंकित हुनेछन् । त्यसैले नेपालमा अब आर्थिक विकास, समृद्धि दिन सक्ने, राष्ट्रियता जोगाउने, बाहिरी हस्तक्षेपलाई परास्त गर्ने खालका राजनीतिक दलको आवश्यकता छ । जनताले यसका लागि कुनै न कुनै विकल्प अवश्य छान्नेछन् ।
० यो सरकार गठन भएको दुई महिना भयो । कामकारबाही कतिको सन्तोषजनक देख्नुहुन्छ ?
— यो सरकारले त केही गर्नै सकेन नि । राजनीतिक दल फुटाउने विधेयक बाहेक अन्य केही गरेको छैन । यो सरकारले दलहरु फुटाएर आफ्नो सत्ता जोगाउने खेलमा लागेको छ । यहाँ संविधानमाथि नै खेलाँची भइरहेको छ । दुई–दुई वटा संविधानसभाबाट निर्माण भएको संविधानलाई निकम्मा बनाउने खेल हुँदैछ । देशमा एउटा दुर्घटना गराउने षड्यन्त्रमा यिनीहरु लागेको देखिन्छ । यिनीहरुको काम कारबाहीबाट जनता सचेत भएर बस्नुपर्छ । यिनीहरु अहिलेसम्म देश बेच्नका लागि राजनीति गर्दै आएकै हुन् नि । अहिलेसम्म नेपालमा शोषक वर्गकै सरकार बन्दै आएको छ । अब जनताले एउटा विकल्प खोजिरहेका छन्, त्यो विकल्प पनि आउँछ ।
० अहिलेसम्म देउवा सरकारको मन्त्रिमण्डल पाँच सदस्यीय मात्रै छ, किन विस्तार हुन सकिरहेको छैन ?
— अहिले यिनीहरु भागवण्डामा लागिरहेका छन् । पैसाका लागि राजनीति गर्दै आएकाहरुबीच तानातान छ । दुई–दुई महिनासम्म यो सरकारले २० वटा मन्त्रालयलाई बन्धक बनाएर राखेको छ । यिनीहरु निकम्मा साबित भइसकेका छन् । यो सरकार आफैले ल्याएको अध्यादेशका कारण गठबन्धनभित्रकै दल फेरि फुट्छ कि भन्ने डर पनि छ । स्वार्थ लिप्सामा लागेकाहरु अहिलेसम्म मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न नसक्नु निकम्मापन हो । पहिला नै असक्षम घोषित भइसकेकै व्यक्तिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेकोले फेरि पनि असक्षम साबित होला कि भन्ने डर छ । संसदमा एमसीसी प्रवेश गर्ने बित्तिकै दृष्यहरु प्रष्ट हुँदै जान्छ ।
० आगामी चुनावका लागि नेपाली जनता दलको तयारी कस्तो भइरहेको छ ?
— यो कोरोनाकालमा पनि हामीले आफ्नो गतिविधिहरु गरिरहेकै छौं । हामीले सातवटै प्रदेशमा दलको प्रमुखहरु चयन गरेका छौं, कमिटी पनि बनाइसकेका छौं । छिट्टै हामी प्रदेश कमिटीको भेलाहरु गर्दैछौं । हाम्रा भेलाहरु सम्पन्न भइसकेपछि चुनावी तयारीमा लाग्छौं । हामी राष्ट्रिय पार्टी हौं । गत निर्वाचनमा हाम्रा मेयर, अध्यक्ष, वडाध्यक्षहरु जितेका छन् । तर सरकारले हामीमाथि बेइमानी गर्न सक्छ । स्थानीय चुनावमा हामीलाई चक्का छाप चुनाव चिन्ह नदिने षड्यन्त्र हुनसक्छ । नेपाली जनता दलले सातवटै प्रदेशमा ७५३ स्थानीय तहमध्ये कम्तीमा ५३ ठाउँमा त जित्छौं नै ।
० गत निर्वाचनमा प्रदेश र संघमा तपाइँहरुको प्रतिनिधित्व हुन सकेन नि ?
— लुटेरा र भ्रष्टाचारीहरुले चुनावमा पैसाको खोलो बगायो । जबसम्म यो देशमा अर्बपति र खर्बपतिहरुलाई भोट बेचिरहन्छ तबसम्म इमान्दार नेताहरु जित्ने सम्भावना छैन । पैसाको प्रतिनिधित्व भइरहँदासम्म विचारको प्रतिनिधित्व हुँदैन । यिनीहरुले देश र जनताको विकासका लागि, जनहितका लागि कुनै काम हुनेवाला छैन । जनता गरिबीमा छन्, रोजगार छैन । लाखौं लाख युवाहरु विदेशिन बाध्य छन् । यी राजनीतिक दलहरुलाई सबै युवाहरु विदेश गइदिए हुन्थ्यो लाग्छ । पैसाको बलमा राजनीतिक भइरहँदा विचारको राजनीति अगाडि आउन सक्दैन । सोही कारणले नेपाली जनता दलको प्रतिनिधित्व प्रदेश र संघमा हुन सकेन । लुटेराहरुको जबसम्म वर्चस्व रहिरहन्छ, तबसम्म अन्य कुनै पार्टीलाई अगाडि बढ्न दिँदैन । यस कुरामा जनता सचेत हुनुप¥यो नि त । स्थानीय तहमा पनि लुटेराहरुले लुटिरहेकै छन् । त्यसकारणले पैसाको बलमा राजनीति गर्नेहरुको अगाडि हाम्रो केही पनि लाग्न सकेको छैन । मैले भन्ने गरेको थिएँ कि ‘मुर्गा, मछली, दारु, नोट अनि जनताले दिन्छन् भोट ।’ त्यहीअनुसारले फेरि चुनाव भयो भने आगामी दिनमा पनि विचारको प्रतिनिधित्व हुँदैन । हामी भनेको सत्य र विचारको राजनीति गर्ने, सामाजिक न्यायको राजनीति गर्ने मान्छे हौं । राजनीति भनेको जितेर मात्रै हुँदैन, हारेर पनि जित्ने दल भनेको नेपाली जनता दल हो ।
जब अधिकार खोसिन्छ त्यसपछि विरोधको कुनै सीमा नै रहँदैन
संविधान दिवस मनाउँदैनौ तर संशोधनका लागि दबाब जारी रहन्छ
‘उपेन्द्र यादवहरूको वामपन्थी धारलाई समयमा बुझ्न नसक्नु गल्ती थियो’
अब कांग्रेसको नेतृत्व मधेशीले गर्नुपर्छ : सांसद चौधरी
उपेन्द्रजीको कारण आन्दोलनबाट स्थापित विचार कार्यान्वयनमा चुनौती थपियो : पूर्वराज्यमन्त्री शर्मा
जसपा विभाजनको कारण व्यक्तिवादी प्रवृत्ति हो : राजकुमार लेखी
‘लाल आयोगको प्रतिवेदन लोकप्रियताकै लागि प्रयोग भइरहेको छ’